Imikhiqizo yokucwenga kwamantombazane
Imikhiqizo yezinyosi zokunakekelwa komama kufanele iqukethe inani eliphakeme lemishini yokudoba, ibe nokuthungwa okumnandi kanye ne-flavour non-aggressive. Sakhele izithako ze-herbal eziphumelela kakhulu kuzimonyo ezokusiza ukuthi uhlale unhle futhi ukhangele.
Ososayensi bathole ukuthi ukusiza isikhumba ukuthi sibhekane nemiphumela emibi yokucindezeleka ngokomzwelo, okusho ukuthi ukuguga kunciphise ukukhishwa kwe-algae ebomvu (baqoqwa ogwini lwaseMedithera ka-Israyeli), okwaba yingxenye eyinhloko ye-moisturizer anti-aging i-moisturizer Clinique Superdefense SPF 25 Age Moisturizer. Izilonda ezinkulu zicebile kakhulu calcium, potassium kanye ne-magnesium, (isithako esiyinhloko ku-Creme de la Meg).
I-algae ayivami ukudala izidakamizwa futhi iqukethe inqwaba yezici ezilandelanayo eziwusizo. Benza ijubane le-metabolism, baxazulule inkinga ye-edema, kanye nemibimbi emincane nezici ezivuthayo.
Ezimonweni zokunakekelwa kwesikhumba omama abahlengikazi, izisekelo ezisemgangathweni zifaka isandla ekuhlanjululeni isikhumba, futhi zine-enzymatic effect, zenza ijubane izinqubo zokuqubuzana, zivuselela ama-collagen ezinhlobonhlobo, zithuthukise ithoni yesikhumba nokuqina.
Ngezindlela zomzimba - ukudonsa uketshezi oludlulele kwizicubu, ukuvimbela i-cellulite, i-detoxification, umphumela we-bactericidal omnene.
Isipho sesibili samanzi amanzi, usawoti usawoti yisisombululo esihle kakhulu sokuvuvukala. Uma uxubusha ngamafutha omnqumo, uzothola ukusikeka okumangalisayo kwemvelo, okuzosiza ukususa uketshezi oludlulayo futhi uhlanzeke isikhumba ngokucophelela (ukuvimbela amanothi elula).
Izakhiwo eziyingqayizivele zezitshalo ezihlwanyelwe ziye zaba isiteji esisha ekuthuthukiseni imikhiqizo eminingi. Umkhiqizo wokuqala we-brand ERBAVIVA kwakuyisindlela ezingenasiphelo zokugeza abantwana, ezikhwameni zepotton ezingenakunyakaziswa nge-oat flakes kanye nobisi oluphilayo. Umzila we-Rice Steam we-KenzoKl brand uyondla, unciphisa futhi uphuthukise isikhumba, ukwandisa umsebenzi we-antioxidants. U-L'Occitane uncoma umugqa osuselwe kulayisi obomvu i-Camart ngenhlanganisela kanye nesikhumba esithinteka ngamafutha.
I-Phosphorus, equkethwe okusanhlamvu, ihileleka ekuqaliseni i-estrogen (ebhekene nesimo sesikhumba). I-Vitamin E ekolweni kakolweni ivikela ukuguga. Amavithamini B elayini ukulwa nokucindezeleka.
Ezithombeni, irayisi, ukolweni kanye nama-oats zivame ukutholakala, ezinamavithamini amaningi kanye nokuhlushwa okuphezulu kwezinto ezisebenzayo, kodwa ngenxa yobhalansi obufanele benza kancani ngobumnene.
Ebusweni - umphumela onamandla wokuvuselela kanye ne-antioxidant, gcina ibhalansi yamanzi ye-epidermis.
Ngezindlela zomzimba - unciphisa isikhumba, uqede ukuthutha nokucasula.
Ukukhishwa kwamagilebhisi amagilebhisi abomvu kugcwele ama-polyphenols, okugqugquzela ukukhipha uketshezi okweqile, namafutha omvini amavini anesithambile se-vitamin E namafutha acids, okondla isikhumba ngamandla.
Khipha ijusi yemifino yomvini kubizwa ngokuthi "imvukuzane yobusha". Manje sekuyi-antioxidant enamandla kakhulu. Ngaphezu kwakho konke, izivini zaseChateau d 'Yquem zidumile - umvini unezakhiwo eziyingqayizivele zokuzivuselela, futhi isivuno saso siphuthuka unyaka nonyaka. Lesi simangaliso semvelo sakha isisekelo socwaningi lwe-Dior emisha emisha, ngenxa yalokho, umzila we-anti-oxidant we-L'Or de Vie wadalwa.
Ifilosofi eyingqayizivele yamagilebhisi isekelwe kuyo yonke ifilosofi yomkhiqizo weCaudalie. Khulisa izivini zayo zomshado waseMatilda noBertrand Tom, kuba yiyona nto eyinhloko yokwakheka kwama-brand cosmetics. I-Viniferin-polyphenol, etholakala emigqeni yomvini, ngokuphumelelayo igcoba i-hyperpigmentation, ijwayele ukuhlanganiswa kwe-melanin, ngenxa yesenzo sayo sokuvimbela i-antioxidant esivimbela ukubonakala kwezindawo ezintsha zokuhlambalaza, okuvame ukujwayela abesifazane abakhulelwe. Ngendlela, e-Spa Caudalie kunezinhlelo ezikhethekile zomama abancane abaza lapha ukubuyisela isibalo ngemuva kokubeletha.
Ema- antioxidants anesifo esibhekene nobuso aphikisana nokuguga okungakapheli kwesikhumba.
Emikhiqizo yomzimba - ilungele izinqubo zokuthutha emva kokukhulelwa; ukuqedwa kwezinto ezinobuthi, ukulahlekelwa kwesisindo, ukuthuthukiswa kwesikhumba, ukugcwala kwamaseli nge-calcium ne-potassium. I-mint ne-lavender ku-cream yokuphumula ebusuku i-Payot Creme de Reves (efanelekile kunoma yiluphi uhlobo lwesikhumba) landisa ukumelana kwesikhumba ukucindezeleka, kunciphisa, kuyondla futhi kuqinisa. Ukugeza ne-lavender kunomphumela oqabulayo. Njengoba ukhuphuka ngokweqile, ubuthongo obunzima, sebenzisa amaconsi ambalwa okuthiwa i-mint noma i-lavender ekubhekeni. I-Peppermint inqubo yokuhlanza: ubuso obunamanzi obuhlaza obuvela ku-Gamier buthambisa kahle isikhumba, buthakathaka ubuthi futhi kusiza amangqamuzana ukuphefumula ngokukhululekile. Ikhambi elihle kakhulu lokugula kwasekuseni i-oyili ebalulekile ye-mint (ungafaka ebhodleleni noma wengeze kancane ebhodini).
Esikhathini esibhekene naso - izithiyo ezincelisayo, izidakamizwa ezilwa nokuvuvukala kanye ne-bactericidal. Ngezindlela zomzimba - unikeza umuzwa wokuhlanzeka, usizo lokukhulula ubuhlungu ngemuva. Ezinhlotsheni zezinwele - i-mint ingagcini nje isikhumba, kodwa futhi ivuselela ukujikeleza kwegazi, iqinisekisa ukungena kwezinto eziwusizo izinwele zezinwele futhi kukhuthaza ukukhula kwezinwele ezintsha.
Okuhle kakhulu ukuthi imvelo isinikeze ukukhulula ukucindezeleka, ukucindezeleka kanye nokuvuselela okusebenzayo kwesimiso sezinzwa. I-perfume ne-haze yendlu inomphumela omuhle futhi owehlisa umzimba.
Umzimba usebenzise i-vitamin C ngokuyinhloko ngemisebenzi ebalulekile, yingakho isikhumba sithola iphutha elingunaphakade. I-Vitamin C ivikela isikhumba emiphumeleni eyingozi yemvelo futhi ifaka ukukhiqizwa kwemvelo kwe-collagen. Ukudla okunamavithamini okuvimbela ukuguga ngaphambi kwesikhathi.
Ukunakekelwa ebusweni - i-vitamin C iyisisusa se-collagen synthesis. Ngezindlela zomzimba - ukuqabula kabusha, ukuqinisa, unomphumela wokulwa ne-cellulite.
Efanelekile kunoma yiluphi uhlobo lesikhumba ngaphansi kokucindezeleka nokukhathala, ukubuyisela ukukhanya kwempilo enamandla namandla, ukunciphisa ukungezwani, ukunciphisa izimpawu zokukhathala, ubuyisele ngisho nokukhanya. I-Collagen enesisindo sevithamini C esivela ku-Olehenriksen, esithandwa yiHalle Berry noKylie Minogue, ne-extracts ye-orange kanye ne-grapefruit, ikhulula ukuthukuthela futhi ivuse isikhumba esibucayi kakhulu.
Ukukhulelwa kwesibili kanye nezici zayo
Nini ukubhalisa nokubonisana kwabesifazane?
Izinwele Zokudla ngesikhathi sokukhulelwa
Ukuncintisana kokuzivocavoca kwabesifazane abakhulelwe
Ukukhulelwa nesandiso se-eyelash
I-Horoscope yeSagittarius-abesifazane ngo-February 2017
Imisebenzi yonyaka omusha enkulisa: isihlahla esenziwe ngoboya bekotini, isigaba samakhono
Izinkokhelo ngesikhathi sokukhulelwa nangemva kokubeletha
Imikhiqizo yokuvikela izinwele ezishisayo
I-Banana inika i-icing icing
Ukuhlanza izinwele ngeviniga
Isikhwama se-fashion checkered 2015: yini okufanele ugqoke isiketi esikhwameni
Kungani umuntu enganikeli ubuhlobo obuseduze
Ukuhlolwa kwezemvelo kwentsha
Indlela yokukhetha umenzi wekhofi efanele
Iphuzi lelayisi ku-microwave
Indlela yokwenza i-wardrobe enengqondo: imithetho engu-4 ezosiza ekuqedeni izinto ezingadingekile!
Imfucumfucu emhlophe enganeni
Ukusikwa kwe-Chinese kuyisixazululo ezinkingeni eziningi zempilo
Amakhamera, ama-vithamini, ama-microelements